ပုရိသတို့ရင်ကို ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် စပါယ်ရှယ် ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး နွယ်နွယ်ထွန်း – Online News Post
ပုရိသတို့ရင်ကို ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် စပါယ်ရှယ် ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး နွယ်နွယ်ထွန်း
ပုရိသ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေး ချစ်ခင်မှု တွေကို အများဆုံးနဲ့ အခိုင်အမာဆုံး ရရှိထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်လ်ဒယ်လ် မင်းသမီးချောလေး တွေထဲမှာ ရစ်လို့အားလုံး က ချစ်နိုးခေါ် ကြ တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း က လည်း အပါ အဝင် ပါပဲနော် … . ညို့အား ပြင်းပြီး အချိုးအစား ကျတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အသည်း ယားစရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေ နဲ့လည်း ဖမ်းစား တတ်တဲ့ ရစ်ရစ် ကတော့ တကယ်ကို ဆိုးနွဲ့တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းသူ လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် … .
သူမရဲ့ မခို့တရို့ဟန်ပန် ပုံရိပ်လေးတွေ ကို အမြဲ မျှဝေလေ့ ရှိတဲ့ ရသ်ရစ် ကတော့ အခု တစ်ခါမှာ လည်း အချိုးအစား ကျလွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း တွေကို အထင်း သား ပေါ်လွင် နေတဲ့ အမိုက်စား ပို့စ်ပေး ဓာတ်ဖမ်း ထားတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ အချစ်ပိုစေ ပြန်ပါတယ်နော်… . ဂီတာရှိတ်လေးလို အချိုးအစား ကျလွန်းတဲ့ အဖုအထစ်ကောက်ကြောင်း တွေက မြင်သူ ပုရိသတွေ တိုင်းကို ရင်ဖိုလှိုက် မော ဖွယ် ညို့အားပြင်း နေတဲ့နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ က တော့ တကယ် ကို
စွဲမက်စရာ ကောင်းလွန်း ပါတယ်နော် … .
“ ခုတ လော အရမ်းတွေ လှချင် လာတာ မင်းကြောင့်များလား ?? … . ” ဆိုပြီး ကျော့ရှင်းတဲ့ အလှတရား တွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး မြင်သူတိုင်း ကို အသည်းယား အောင် အချစ်ပို စေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှ ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်နော် … . အဲ့ဒီပို့စ်ရဲ့ အောက်မှာ တော့ ပုရိသ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် ကြတဲ့ Comment လေးတွေ အပြင် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ကပါ သ ဘော ကျစွာ ချစ်ခင် အားပေး နေကြတာ ကိုလည်း မြင်တွေ့ ရပါတယ်နော် … .
source : Nwe Nwe Tun
ပုရိသ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ တစ္ခဲနက္ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈ ေတြကို အမ်ားဆုံးနဲ႔ အခိုင္အမာဆုံး ရရွိထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္လ္ဒယ္လ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေတြထဲမွာ ရစ္လို႔အားလုံ းက ခ်စ္နိုးေခၚ ၾက တဲ့ ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း က လည္း အပါ အဝင္ ပါပဲေနာ္ … . ညိဳ႕အား ျပင္းၿပီး အခ်ိဳးအစား က်တဲ့ ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး အသည္း ယားစရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ဟန္ပန္ေလး ေတြ နဲ႔လည္း ဖမ္းစား တတ္တဲ့ ရစ္ရစ္ ကေတာ့ တကယ္ကို ဆိုးႏြဲ႕တဲ့ ပုံစံေလး နဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းသူ ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ … .
သူမရဲ့ မခို႔တရို႔ဟန္ပန္ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို အျမဲ မၽွေဝေလ့ ရွိတဲ့ ရသ္ရစ္ ကေတာ့ အခု တစ္ခါမွာ လည္း အခ်ိဳးအစား က်လြန္းတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္း ေတြကို အထင္း သား ေပၚလြင္ ေနတဲ့ အမိုက္စား ပို႔စ္ေပး ဓာတ္ဖမ္း ထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ အခ်စ္ပိုေစ ျပန္ပါတယ္ေနာ္… . ဂီတာရွိတ္ေလးလို အခ်ိဳးအစား က်လြန္းတဲ့ အဖုအထစ္ေကာက္ေၾကာင္း ေတြက ျမင္သူ ပုရိသေတြ တိုင္းကို ရင္ဖိုလွိုက္ ေမာ ဖြယ္ ညိဳ႕အားျပင္း ေနတဲ့ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြ က ေတာ့ တကယ္ ကိုစြဲမက္စရာ ေကာင္းလြန္း ပါတယ္ေနာ္ … .
“ ခုတ ေလာ အရမ္းေတြ လွခ်င္ လာတာ မင္းေၾကာင့္မ်ားလား ?? … . ” ဆိုၿပီး ေက်ာ့ရွင္းတဲ့ အလွတရား ေတြ အထင္းသား ေပၚလြင္ေနၿပီး ျမင္သူတိုင္း ကို အသည္းယား ေအာင္ အခ်စ္ပို ေစတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ေဝမၽွ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္ … . အဲ့ဒီပို႔စ္ရဲ့ ေအာက္မွာ ေတာ့ ပုရိသ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ ၾကတဲ့ Comment ေလးေတြ အျပင္ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြ ကပါ သ ေဘာ က်စြာ ခ်စ္ခင္ အားေပး ေနၾကတာ ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ ရပါတယ္ေနာ္ … .
Previous post ချစ်စရာ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ G ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး
Next post ရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားပြောဆိုခဲ့သူကို ထိမိစွာနဲ့ ပြောဆိုချေပလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်